Seychelles waxay u furantahay adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka kala duwan » Seychelles waxay u furantahay adduunka
Jebinta Wararka Caalamka • Jabinta Wararka Seychelles • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Seychelles waxay u furan tahay adduunka
Jasiiradda jasiiradda Badweynta Hindiya ee loo soo gaabiyo Seychelles ayaa ku dhawaaqday inay soo dhaweynayso booqdayaasha adduunka oo dhan, iyadoon loo eegeynin heerka tallaalkooda, laga bilaabo Maarso 25, 2021. Booqdeyaasha ka socda Koonfur Afrika weli looma oggolaan doono inay galaan Seychelles illaa iyo hadda dib u eegis.
Warkan waxaa shaaca ka qaaday Wasiirka Arimaha Dibada iyo Dalxiiska, Sylvestre Radegonde oo subaxnimadii Khamiista, Maarso 4, 2021, saxaafada kula hadashay qolka shirarka ee Gudiga Dalxiiska Seychelles (STB) ee ku taal Botanical House kadib shirkii Gudiga Xoogga Dalxiiska ee Dalxiiska.
Booqdayaasha waxaa hadda looga baahan doonaa oo keliya inay soo bandhigaan baaritaanka PCR-ga ee xun ee la qaaday 72 saacadood kahor bixitaanka.
Ma jiri doono shuruudo karantiil ah ama xaddidaadda dhaqdhaqaaqa marka la galo Seychelles.
Intaa waxaa sii dheer, joogitaanka ugu yar ee xarumaha markii la yimaado ma sii jiri doono.
Si kastaba ha noqotee, booqdayaasha waxaa wali looga baahan doonaa inay u hogaansamaan talaabooyinka kale ee caafimaadka bulshada ee la saaray iyadoo la fiirinayo aafada faafida kuwaas oo ay ka mid yihiin xirashada wejiga wajiga, ka fogaanshaha bulshada, nadaafadda joogtada ah ama gacmaha oo la dhaqo.
Tallaabooyinka cusubi waxay sidoo kale fursad u siinayaan dadka soo booqanaya dhammaan aagagga ay wadaagaan hudheelku oo ay ku jiraan baararka, barkadaha lagu dabaasho, isboortiga iyo naadiga Kid.
Wasiirka Radegonde wuxuu cadeeyay in go'aanka dib u eegista iyo dabacsanaanta habsami u socodka soo galitaanka dalka ay suurta galisay iyadoo laga duulayo guushii laga diiwaan galiyay ololihii talaalka gardarada ahaa ee wadanku bilaabay bilawgii sanadka.
“Ololaha tallaalka si guul leh ayuu ku dhammaaday. Dowladdu waxay sameysay wax walba oo karaankeeda ah si loo hubiyo in dadka la ilaaliyo. Waxaan hadda gaarnay meeshii aan xudduudaheenna sii furi lahayn waa tallaabada xigta ee noo oggolaaneysa dib-u-soo-kabashada dhaqaale. Tallaabooyinka la shaaciyey waxay si guud uga tarjumayaan talo soo jeedinta dalxiisayaashayada dalxiiska ah waxaana lagu sameeyey wadatashi buuxa iyo oggolaanshaha maamulladayada caafimaadka. ”
Jasiiradda yar ee ka baxsan xeebta bari ee Afrika ee dhaqaalaheeda ugu horreyn ku tiirsan yahay dalxiiska ayaa ahaa waddankii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee bilaaba olole tallaal geesinimo leh, dhammaystiran oo wax ku ool ah Covid-19, bishii Janaayo 2021.
Meesha loo socdo waxay si isdaba joog ah u eegi doontaa tallaabooyinka cusub ee soo galida si loo hubiyo in marwalba aan waxyeello u geysan caafimaadka iyo badbaadada martida iyo dadka deegaanka.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa la heli doonaa waqti yar iyada oo loo marayo la-talinta safarka ee la cusbooneysiiyay www.tourism.gov.sc.